रामवीरको राजीनामा रोकिँने संकेत,वामदेवको प्रयासमा फेरि पूर्णविराम लाग्दै ! - Recent Nepal News
रामवीरको राजीनामा रोकिँने संकेत,वामदेवको प्रयासमा फेरि पूर्णविराम लाग्दै !
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन २४, २०७५ समय: २१:२१:४२
काठमाडौं,असोज २४ – वामदेव गौतमको उपचुनाव लड्ने प्रयासमा फेरि पूर्णविराम लाग्ने भएको छ । उपचुनावको चौतर्फी रुपमा विरोध भैरहेको बेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली, माधव नेपाल लगायत नेताहरु रामवीरको राजीनामा रोक्ने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । नेकपाका एक नेताका अनुसार पार्टी सचिवालय वैठक दशैं पछिका लागि सारिएको छ ।
आज बुधबार सचिवालय वैठक बसेको भए पनि राजीनामा सम्वन्धमा कुनै निर्णय नभएको जनाईएको छ । स्रोतको अनुसार सांसदले दिएको राजीनामा स्वीकृत या अस्वीकृत गर्ने निकाय पार्टी सचिवालय होइन । सचिवालयमा कुनै निर्णय नगरेर रामवीरको राजीनामा रद्दीको टोकरीमा फालिदिने पक्षमा ओली पक्ष रहेको बुझिन्छ ।
स्रोत अनुसार रामवीरलाई राजीनामा गर्न वाध्य पार्ने कामको अगुवाई गरेका थिए विष्णु पौडेलले । जानकारहरुका अनुसार विष्णु पौडेल, वामदेव गौतम र प्रचण्डको टिम बनेको छ । रामवीर मानन्धरले सांसद पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । उनले पार्टीमा राजीनामा पनि बुझाईसकेका छन् तर सभामुख समक्ष राजीनामा बुझाएका छैनन् । रामवीरको राजीनामा नेकपाको सचिवालय वैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरिसकेका छन् । सो राजीनामा सम्वन्धमा अहिले कुनै निर्णय नहुने भएको छ । निर्णय नहुनुको अर्थ हो रामवीरले राजीनामा नदिने वातावरण बन्न सक्छ ।
नेकपाको स्थायी समिति वैठक कार्तिक १२ गतेका लागि राखिएको छ ।